बिज्ञान/प्रविधि – Page4– JanaSanchar.com
यस्तो छ भारतीय राष्ट्रपति चढ्ने मर्सिडिज कार
एजेन्सी ।भारतका १४औं राष्ट्रपतिमा रामनाथले २५ जुलाईमा सपथ लिंदैछन । सपथपछि उनलाई सुविधायुक्त ३ सय ४० कोठाको भवन मिल्नेछ । यसको साथै राष्ट्रपतिले अत्याधुनिक मर्सिडिज बेञ्च एस-६०० पुलम्यान लिमोजिन कार पनि पाउनेछन । यो अत्याधुनिक कारमा हतियार देखि क्यामरासम्म जडान गरिएको छ । टायरमा हावा नुँदा पनि यो कार ८० किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले..
​मोबाइल धेरै तात्छ ? कारण र समाधान
चार्जमा राख्दा या फोन गर्दाको समयमा तातेर आउने समस्याले कतिपय स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता तनावमा हुन्छन् । धेरै नै तातेपछि पड्किने पो हो की भन्ने भय पनि जन्मिन्छ । तर, स्मार्टफोन तात्नुमा कतिपय गल्ती प्रयोगकर्ताबाटै भएको हुन्छ । सानातिना विषयमा ध्यान पु-याउँदा फोन तात्ने समस्याबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ । ९ गल्तीले तात्छ फोन ..
भौतिकशास्त्री स्टेफेन हकिङले पृथ्वी विनासतर्फ उन्मुख भइसकेका कारण मानव जातिको रक्षा गर्न बाह्य ग्रहमा मानव बस्ती सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन्। विगत केही समयदेखि बेलायती वैज्ञानिक हकिङले निरन्तर पृथ्वीको जोखिमका बारेमा कुरा गर्दै आएका छन्। ‘पृथ्वी यति धेरै कोणहरुबाट जोखिममा परेको छ कि यसको भविष्यबारे सोच्दा सकारात्मक हुन् गाह्रो..
काठमाडौं : मंगलग्रहको उपग्रह ‘फोबोस' मा अन्तरिक्षा यात्री बस्न सक्ने वासस्थानको नमुना तयार गर्न अन्डरग्य्राजुएट तहका इन्जिनियरिङबीच संसारभर गराइएको प्रतिस्पर्धामा नेपाली विद्यार्थीको समूह विजेता तीनमा छनोट भएको छ ।अमेरिकन इन्स्टिच्युट अफ एरोनटिक्स एन्ड एस्ट्रोनटिक्स (एआईएए)ले आयोजना गरेको प्रतिस्पर्धामा चार नेपाली विद्यार्थी..
म्याग्दी/ भौतिकशास्त्रमा प्रवेगको नभई प्रदूर्यान्तरको भूमिका महत्वपूर्ण हुने तथ्य खुलासा भएको छ । म्याग्दी जिल्लाको बेनी नगरपालिका–२ ज्यामरुककोटका युवा वैज्ञानिक एवम् खोजकर्ता भवीन्द्र कुँवरले अनुसन्धान गरी उक्त तथ्य पत्ता लगाउनुभएको हो । यसबाट प्रवेग र सुवात इतिहासमा सीमित हुने भएका छन् । कुँवरले भौतिक विज्ञानमा चार..
आइफोन ८ का ६ रोचक विशेषता
एप्पल कम्पनीको दशौँ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर सार्वजनिक गर्न लागिएको आइफोन ८ का बारेमा अनेक अनुमान लगाइएको छ तर आइफोन ८ मा राखिन लागिएका वास्तविक फिचर्सहरु भने हालै सार्वजनिक भएको छ । यिनै विशेषताहरुका बारेमा आज तपाईलाई जानकारी दिँदैछौँ । १. भर्चुअल रियालिटी आउँदो एप्पल ८ मा भर्चुअल रियालिटी एप पहिल्यै इन्स्टल गरिने हुनाले यसले..
‘यो कालो गेट नै बेगुनी रहेछ । यहाँभित्र पस्दा मान्छे सञ्जन देखिन्छ, बाहिर गएपछि के हुन्छ के ?’ उमेरले ७४ पुगेका मुनिबहादुर जीबनको कथारुपी पोको खोल्दै थिए । काठमाडौँको घट्टेकुलो चोकमा पर्खालले घेरिएको सेतो घर छ । ढोका खोलेर भित्र पसेपछि एउटै कम्पाउण्डमा ३ वटा घर रहेको थाहा हुन्छ । एउटा घर आवास हो । दोस्रो कार्यालय र तेस्रो कम्पुटर संग्रालय..
प्रविधिको युगमा पेनड्राइभको महत्व सबैलाई थाहै छ । सानो सामान भए पनि पेनड्राइभको काम ठूलो छ । आफ्ना महत्वपूर्ण डाटा सुरक्षित स्टोर गर्न सकिने पेनड्राइभलाई सुरक्षित बनाउनु पहिलो कर्तव्य हो । पेनड्राइभमा पासवर्ड राखिदिएर लक गर्न सकिन्छ । कुनै एडिसनल सफ्टवेयरविना पनि लक गर्न सकिन्छ । तर, यो काम विन्डोज सेभेन अल्टिमेट ओएस र यसको अपरेटिङ..